दशैं यसकारण मगरहरुको होइन
मगर समाजमा दशैं र तिहार मनाउने चलन कहिलेबाट सुरु भयो ? यसको ऐतिहासिक महत्व र कारण के हो ? यस सम्बन्धमा वास्तविक खोजी नगरी पुर्खाले मान्दै आएको भनी सबै मगरहरुले आँखा चिम्ली मान्दै आएको बुझिन्छ ।
रामायण र दशैं:
हिन्दू साहित्य ‘रामायण’को कथनअनुसार अयोध्याको रामले लङ्काका राक्षस राजा रावणलाई दशौं दिनमा हराई लंका विजय गरी अयोध्यामा राम फर्केको खुसियालीमा दशैं अर्थात् विजया दशमी मनाएको भनी मगरहरुमा हिन्दु बाहुनहरुले प्रचार गरेको बुझिन्छ ।
उपरोक्त उदाहरणबाट के स्पष्ट हुन्छ भने रामायणको कथा वास्तविकतामा आधारित नभई अधिकांश काल्पनिक कथा वा एउटा कथाको काल्पनिक, कथ्यौरी मात्र हो । भारतमा १६ औं शताब्दीभन्दा अघि राम मन्दिर बनेको वा रामलाई ईश्वरको रुपमा पूजा गरेको पाइँदैन । सन् १५५४ वा १५३२ मा जन्मेका तुल्सीदासको इष्टदेव रामको महिमालाई ईश्वरतुल्य बनाई तुल्सीदासको रामायण लेखेपछि मात्र रामलाई ईश्वरको अवतारको रुपमा मानिने वा पूजा गरिने चलन भारतमा चलेको हो (नवभारत टाइम्स, ४ जनावरी १९९०) ।
कालान्तरमा आएर रामायणको कथामा देश, काल, परिस्थितिअनुसार विभिन्न अन्धविश्वास, परम्परा र प्रचलन थपिँदै गएर आज विकृत रुपमा रामायणको कथा हाम्रो सामु छ । पहिले पहिले दशैंमा मार हान्ने दिनमा बाहुनहरु मगरको घरमा आई मालश्री गाउने गर्थे तर पछि तिनीहरुले छोडी स्वयं मगरहरुले गाउन सुरु गरे । यस्ता कुराहरु लेख्दै जाने हो भने धेरै छन् ।
मगर र दशैं:
नेपालमा मगर जातिहरुको इतिहास हेर्दा मगरहरु सुरुमा हिन्दु चाडपर्व मान्ने जाति थिएनन् । तेह्रौं शताब्दीमा मुसलमानहरुको भारत प्रवेशपछि नेपाल पसेका शरणार्थी बाहुनहरुको चपेटामा सबैभन्दा पहिले यहाँका खसहरु (बाहुनबाट खसेको क्षेत्री होइन) थारुहरु र मगरहरु परेका हुन् । मध्य–नेपाल हालको गण्डक–लुम्बिनी, गण्डकको, धौलागिरी क्षेत्रमा बाहुनहरुले प्रवेश गर्दा सर्वप्रथम यस क्षेत्रका मगर राजाहरु र मगर मुखियाहरुलाई प्रभावित पारी हिन्दू क्षेत्री बनाए । फलस्वरुप आज अमरसिंह थापा, भीमसेन थापाहरु थापा क्षेत्री भनी बाहुनहरुले लेखेको इतिहासमा पढ्न पाइन्छ । वास्तवमा यिनीहरु मगर हुन् (Gurkhas, Vansitart, पृष्ठ ६१) ।
पाल्पाका मुकुन्द सेन मगर नै हुन् (Nepal, Daniel Right, पृष्ठ १०२) । यहाँसम्म कि गोरखाको राजालाई पनि मगर हो भनी प्रस्ट उल्लेख गरेको पाइन्छ (हिमपत साँस्कृतिक, वि.सं २०१६, पृष्ठ ९) । जेहोस्, बाहुनहरुको हिन्दुकरणको अभियानबाट सबैभन्दा बढी मगरहरु प्रभावित भएका छन् ।
पहिले पहिले दशैंमा मार हान्ने दिनमा बाहुनहरु मगरको घरमा आई मालश्री गाउने गर्थे तर पछि तिनीहरुले छोडी स्वयं मगरहरुले गाउन सुरु गरे । यस्ता कुराहरु लेख्दै जाने हो भने धेरै छन् । यहाँ छोटकरीमा भन्न खोजिएको के हो भने दशैं चाड मगरहरुको पर्व होइन र यसलाई नमानेमा कुनै मगर नक पस्दैन । मगर जातिको पूर्व इतिहास, परम्परा र संस्कृतिसँग दशैं पर्वको कुनै सम्बन्ध छैन ।
मगर र तिहार:
साभारः मगर जागरण, वर्ष २, अङ्क २
प्रकाशित मिति १४ आश्विन २०७५, आईतवार १७:४५